मलेसियामा तिहारको अघिल्लो दिन १२ जना नेपाली युवती प’क्राउ !
मलेसियामा तिहारको अघिल्लो दिन १२ जना नेपाली युवती यस्तो अवस्थामा प’क्राउ !
क्वालालम्पुर : मलेसियाको अध्यागमन विभागले क्वालालम्पुरको पु’डुमा छापा हानेर केहि वि’देशिहरुलाई प’क्राउ गरेको छ । मलेसियाको पु’डुमा भन्ने स्थानमा यस अगाडी पछि प्रहरी छा”पा मा’रेर दर्जन बढी महिला प’क्राउ गरेको थियो ।
मलेसियाको हटस्पटको रुपमा लिइने उक्त होटलमा वे’श्या|वृ’तीमा संम्लग्न भएकाहरुलाई प’क्राउ गरिएको जनाएको छ । वारम्वार छा’पा हा’न्दापनि कुनै परिवर्तन नआएको भन्दै फेरी पनि छा’पामा पाचँजना भिय’तनामि महिला र सात जना
वंगलादेशि सहित नेपालि म’हिला पक्रा’उ गरिएको त्यहाको अध्गागमन विभागले जनाएको छ । यसैगरी पुचोगमा दिउसो छा’पा हा’निएको र त्यहाँवाट १२ जना प’क्राउ परेका थिए ।
उनीहरुको कुन देशका थिए कुनै खुलाईएको छैन । यसैगरी साईवरजयाको एउटा क्लवमा पनि छा’पा मार्दा त्यहावाट भाग्न खोज्दा एक ब्यक्ति पोखरीमा परेका थिए ।
पोखरीमै हा’मफालेर समातिएको छ । प’क्राउ परेकाहरुलाई सिमोनिया डि’पोमा राखिएको र आवश्यक का’र्वाहि गरिने वताईएको छ । मलेसिया नेपालीको पहिलो बैदेशिक रोजगारीको गन्तव्यको रुपमा परिचय बन्दै गएको छ ।-चिया गफ बाट
२०७८ कार्तिक २०, शनिबार ११:४४ 1 Minute 126 Views